Madaxtooyada Soomaaliya oo ka jawaabtay hadalkii Cumar Cabdirashiid ee ahaa in Jubland putland, saaxiibadooda Itoobiya iyo Imaaraadka ay sameeystaan is badal hogaamiye siyaasadeed!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Madaxtooyada Soomaaliya oo ka jawaabtay hadalkii Cumar Cabdirashiid ee ahaa in Jubland putland, saaxiibadooda Itoobiya iyo Imaaraadka ay sameeystaan is badal hogaamiye siyaasadeed!!
Madaxtooyada Soomaaliya oo ka jawaabtay hadalkii Cumar Cabdirashiid ee ahaa in Jubland putland, saaxiibadooda Itoobiya iyo Imaaraadka ay sameeystaan is badal hogaamiye siyaasadeed!!
Previous PostSenator ka tirsan aqalka sare oo xafiis uu ugu adeegayo bulshada ka furay Cadaado Daawo Sawirro!! Next PostQof waliba qaab dadban waxa uu kuu sheegayaa ama ka dareemeysaa "Waxaan Raadineynaa Nolol Wanaagsan" laakiin....................!!